Global Voices teny Malagasy » #SayNOto66d: Mandrakitra Ny Fitomboan’ny Tranga Fanalam-baraka Antserasera Ao Myanmar · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Marsa 2018 4:28 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino, Thant Sin Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Saripikan'olona iray mijery ny tranonkalan'ny #SayNOto66d. Nahazoana alalana.
Vondrona mpanandra-teny maromaro any Myanmar no nanangana tranonkala  ahitana vaovao momba ny tranganà fanalam-baraka an-tserasera nandritra ny dimy taona farany, izay tafiditra amin'ny hetsika mitaky ny fanafoanana ny andininy faha-66 (d) ao amin'ny Lalàna mifehy ny Fifandraisan-davitra izay manameloka ny fanalam-baraka an-tserasera.
Natomboka sy novolavolain'ny Phandeeyar fihaonan-dalan'ny teknolojia ao an-toerana ny tranonkala # SayNOto66d. Aingam-panahy avy amin'ny asan'ny Hetsika ho Fanavaozana ny Lalànan'ny Fifandraisandavitra sy ny Fanafoanana ny And.66D izany, fiaraha-mientana  ahitana fikambanana fiarahamonina sivily miisa 22.
Manasongadina fikarohana  nataon'ny Free Expression Myanmar izay nanara-maso ireo tranga 66 (d) teo anelanelan'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2017 izany.
Niteraka adihevitra hatramin'ny taona 2013 Ny andininy faha-66 satria nampiasain'ny  manampahefana indrindra mba handrahonana ireo mpitsikera sy ny mpanao gazety. Nohararaotina  ny fanjavozavon'ny fepetra sy ny sazy henjana mba hampangina ny olom-pirenena tsotra. Ity ny lahatsoratra ao amin'ny andininy faha-66 (d):
66. Na iza na iza manao ny iray amin'ireto asa manaraka ireto dia tokony voampanga higadra an-tranomaizina mandritra ny fe-potoana tsy mihoatra ny telo taona na mandoa onitra na izy roa mihitsy. d) Maka an-keriny, manery, mametra tsy ara-drariny, manala-baraka, manakorontana, mampiasa fahefana tsy araka ny tokony izy na mandrahona olona amin'ny fampiasana Tambajotra Fifandraisan-davitra.
Tamin'ny taona 2017, nanova ny Andininy faha-66 (d) ny governemanta izay nanome alalana ireo voampanga mba handoa onitra, nampihena ny sazy any am-ponja, ary nandràra ny fametrahana fitoriana raha toa ka tsy voakasika mivantana amin'ny tranga fanalam-baraka ny voampanga.
Saingy nanindry mafy ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa tsy mba nijery ny ahiahin'ny olona maro momba ireo fepetra henjana amin'ny lalàna ireo fanitsiana ireo.
Nampitandrina  ny Free Expression Myanmar fa tsy hanakana ny fitomboan'ny tranga fanalam-baraka ny fanitsiana:
Tsy hanakana ny raharaha hiditra fitsarana ny fanovana kely natao tamin'ny Lalàna mifehy ny Fifandraisandavitra. Mpanao gazety, mpampiasa Facebook sy mpiaro ny zon'olombelona no miatrika hatrany ny mety ho fanenjehan'ny 66(d) noho ireo antony manjavozavo sy ny fangatahan'ireo olona sy andrim-panjakana matanjaka.
Mba hampahafantarana ny besinimaro momba ny loza ateraky ny andininy faha-66(d), nampakatra vaovao tsara ho fantatra rehetra mifandraika amin'ireo raharaha fanalam-baraka 106 notoriana teo anelanelan'ny taona 2013 ka hatramin'ny taona 2017 ny tranonkala # SayNOto66d.
Namintina ny fikarohana hitan'ny Free Expression Myanmar izany:
1. Ny ankamaroan'ny raharaha tratran'ny 66 (d) dia olona matanjaka mitaraina momba ireo mitsikera azy.
2. Matetika voaheloka sy voasazy ireo voampanga ary mafy tsy mifanaraka loatra ny sazy.
3. Ireo olona manana fitoriana ara-drariny, toy ny vehivavy miatrika herisetra amin'ny aterineto, no terena hampiasa ity lalàna tsy araka ny tokony ho izy ity satria tsy misy lalàna hafa.
Namoaka sary maromaro ihany koa ny tranonkala #SayNOto66d izay mampiseho fa ny ankamaroan'ireo raharaha fanalam-baraka dia fitoriana napetrak'ireoo mpikambana ao amin'ny Ligy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia (NLD) izay tonga teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 2016.
Nandiso fanantenana ireo mpikatroka marobe ao anatiny sy ivelan'i Myanmar izany satria anisan'ny hetsika mpomba ny demaokrasia izay nanohitra ny fitondrana miaramila  nandritra ny taona maro ny NLD. Raha tokony hanova na hanafoana ny lalàna manafay nataon'ny fitondrana miaramila, mamela ireo manampahefana miaramila, mpanao politika, sy olona matanjaka hafa mba hampiasa ny lalàna toy ny 66 (d) ny governemanta tarihin'ny NLD mba hanenjehana sy hanorisorenana ireo mpitsikera azy.
Raharaha 66D nalaina tao amin'ny tranonkala 
Nampiseho ihany koa ireo sary hafa fa mifandray amin'ny fanjakana ny ankamaroan'ireo mpitory.
Pikantsary avy amin'ny tranonkala #SayNOto66d
Ankoatra ny fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka momba ny raharaha 66(d), miaro ny fanafoanana ny lalàna amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo mpitsidika mba hanasonia fanangonan-tsonia an-tserasera, mandresy lahatra ny parlemanta, ary mitatitra  momba ny raharaha 66 (d) izay mbola tsy ao anatin'ny lahtahiry ihany koa ny tranonkala.
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Global Voices, Khin avy amin'ny Phandeeyar nanamarika ny tanjona lehiben'ny tranonkala:
Ny tanjon'ny tranonkala dia ny hanome fiarovana mifototra amin'ny zava-misy mba hampahafantatra ny rehetra momba ny 66 (d) indrindra indrindra ny fitambaran'isan'ireo raharaha rehetra ary manasongadina ny anton'ny fitoriana olona izay misy ifandraisany akaiky amin'ny fitsikerana ny fanjakana. Afaka mampiasa ny angona hita ao amin'ny tranonkala ireo mpanao gazety sy mpikaroka mba handraisana anjara sy hanamafisana ny hetsika.
Vondrona maro samihafa no manosika ny tsy fanamelohana ny fanalam-baraka sy famolavolana lalàna momba ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy.
Mandritra izany, nisarika ny sain'ny  governemantan'i Myanmar momba ny anjara andraikitry ny 66 (d) amin'ny fanimbana ny fahalalahana miteny ao amin'ny firenena ny Filankevitry ny Firenena Mikambana misahana ny Zon'olombelona.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/27/116670/
 fiaraha-mientana : https://www.saynoto66d.info/contact-us.html
 fitondrana miaramila: https://www.merriam-webster.com/dictionary/junta
 Raharaha 66D nalaina tao amin'ny tranonkala : https://infogram.com/aa5f7bc5-2cac-476e-864f-2db75ac5c5b3
 fanomezam-baovao : https://www.saynoto66d.info/documents.html
 nisarika ny sain'ny: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21109&LangID=E